တမ်းပလိတ်:Infobox grapheme - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးတွင် အိုင်ပီအေ(IPA) ဖိုနက်တစ် သင်္ကေတများ ပါဝင်ပါသည်။ အိုင်ပီအေ(IPA)စာလုံးများကို ဖေါ်ပြနိုင်သောဖောင့်အထောက်အကူ မရှိပါက၊ ထိုစာလုံးများနေရာတွင် မှန်ကန်သည့် ယူနီကုဒ် မဟုတ်သော စာလုံးများကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ မေးခွန်းသင်္ကေတ(?)များ၊ လေးထောင့်ကွက်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားသင်္ကေတများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အိုင်ပီအေ သင်္ကေတများ၏ မိတ်ဆက်သိမှတ်ဖွယ်ရာတို့ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]
၁.၂ Options for type parameter
၁.၃ Options for SHform parameter
This template is intended to be used forashort, but accurate, description ofagiven page devoted toaGrapheme. Along with this, the template also automatically attachesacontent warning for IPA symbols (see above/to the side) andacategory tag for Category:Graphemes, both for technical measures. Below is the full Syntax for the template and the options for various parameters. Above/To the side is the transclusion of the template itself, with its parameters' values substituted for their respective italicized names in code.
Options for type parameter[ပြင်ဆင်ရန်]
Select color coding according to the type of writing system:
Abjad Alphabet Abugida Syllabary Semisyllabary
Manual Pictographic Ideographic Logographic
Stenography Shorthand Undeciphered Alternative (default)
Options for SHform parameter[ပြင်ဆင်ရန်]
This field should only be included if "type" = stenography or shorthand. Select text color coding according to the shorthand letterforms:
Cursive Printed Stenographic Geometric Script
Semi-Script Elliptical Script-Geometric (default)
အထက်ပါ အသုံးပြုပုံ လက်စွဲ (documentation)သည် တမ်းပလိတ်:Infobox grapheme/doc မှ ကူးပြောင်းထည့်သွင်း (transclude လုပ်)ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ (တည်းဖြတ် | ရာဇဝင်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Infobox_grapheme&oldid=523137" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။